News – Page2– Trend.com.mm
Posted on November 25, 2019 by Wint
လော့အိန်ဂျယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ 2019 American Music Awards ပွဲကြီးကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီပွဲမှာ ဘယ်သူတွေဆုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on Living Proof သီချင်းနဲ့ 2019 AMAs ပွဲကြီးမှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ Camila Cabello
ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာ ဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ရတာမျိုးပါ။ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေအပေါ်ယုံကြည်ပြီးဘာမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသူတွေဟာ ဒီအချက်တွေကိုလည်း အမြဲလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ *ပြုံးတယ် ပြုံးလိုက်ရင်ညစ်နေတဲ့စိတ်တွေတောင် ခဏပြေပျောက်သွားရတယ်။ကိုယ့်အပူလည်းပြေပျောက်သလို ကိုယ့်အပြုံးကိုမြင်ရတဲ့သူကလည်းစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။အထူးသဖြင့် ပြုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပျော်ရွှင်စိတ်ဖြစ်လာပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိသူတွေအမြဲလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ?
Posted on November 22, 2019 by Wint
ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၂ရက်နေ့ဟာ Song Hye Kyo ရဲ့အသက် ၃၈နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါ တယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်စကားတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ Song Hye Kyo
ကျွန်တော်တို့တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေထက် အရသာရှိပြီး အဆီများအသားများတဲ့အစားအစာတွေကိုပိုပြီးသဘောကျကြပါတယ်။အဲ့ဒီသရေစာတွေက ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်း အဲ့ဒီသရေစာတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြတ်လို့ရတဲ့အထဲမှာတော့ မပါခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့ ဒီသရေစာအမြဲစားမိနေတတ်တဲ့အကျင့်ကြီးကို ဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ? » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on သရေစာအမြဲစားမိနေတဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ?
နာနတ်သီးဖျော်ရည်ဟာ တကယ်ပဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေသလား?
Posted on November 19, 2019 by Noel
နာနတ်သီးက လူအများစုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသီးအနှံတစ်မျိုးပါ။အရသာလည်းကောင်းမွန်သလို သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေဆိုတာလည်းအများကြီးပါပဲ။လေ့လာချက်တွေအရ နာနတ်သီးဖျော်ရည်သောက်တာက ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်းကျဆင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် နာနတ်သီးက ၀ိတ်ကျစေတာလဲ? * ဇီဝဖြစ်စဉ်ကောင်းမွန်စေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on နာနတ်သီးဖျော်ရည်ဟာ တကယ်ပဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေသလား?
Time Square ကြေငြာဘုတ်မှာ Song Hye Kyo အတွက် ပရိတ်သတ်တွေဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ …
Posted on November 19, 2019 by Wint
နိုဝင်ဘာ ၂၂ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် မင်းသမီး Song Hye Kyo ရဲ့မွေးနေ့အတွက် Time Square » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on Time Square ကြေငြာဘုတ်မှာ Song Hye Kyo အတွက် ပရိတ်သတ်တွေဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ …
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ငွေထက် သင့်ကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာဆိုတာ…
ငွေက သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။သင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်တယ်။သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငွေထက် သင့်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတစ်ခုကို ရှာဖွေလေ့လာသူတွေက တွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းပါပဲတဲ့။ Yale နဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ငွေထက် သင့်ကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာဆိုတာ…
လေ့လာချက်တွေအရ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လေးငါးနှစ်အရွယ် ကလေး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်မားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးက ကျန်းမာဝဖြိုးတာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်တွေ အ၀လွန်တာမျိုးမဖြစ်အောင် ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးသင့်…
စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်ကနေ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်ကြားမွေးဖွားသူတွေကို တူရာသီဖွားတွေလို့ခေါ်ကြတယ်။တူရာသီဖွားတွေမှာ ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထား အမူအကျင့်တွေရှိတတ်လဲ…? လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on တူရာသီဖွားတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအမူအကျင့်တစ်ချို့
ဟိုးသေးသေးလေးတည်းကနေ သူတို့လေးတွေကို အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ရတာ အခုတော့ Bentley Hammington လေးက နိုဝင်ဘာ ၇ရက်နေ့မှာပဲ အသက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on (၂)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ The Return of Superman မှ Bentley လေး